တစ်ဦးကပါတီပြီးနောက်လျှော်ဟင်းကိုမုန်း? - ဤသင်၏အသက်တာကိုပြောင်းလဲလိမ့်မယ်
19-05-06 ရက်နေ့တွင်အားဖြင့် admin
ဟင်းလျာများဆေးကြောတဲ့ပါတီပြီးနောက်နှင့်အထူးသဖြင့် Ganesh Chaturti နှင့် Diwali တူသောပွဲတော်များစဉ်အတွင်းအိမ်မှာအကြီးမားဆုံးပြဿနာများ၏တဦးတည်းဖြစ်၏။ အဆိုပါဧည့်သည်အားလုံးသောနေ့၌လာမယ့်အတူကသငျသညျအိမျကိုအကူညီများပင်လျှင်စုပ်စီမံခန့်ခွဲရန်ခက်ခဲဖြစ်လာသည်။ pl အတွက်အစားအစာစေခိုင်းရာမှအအလုံအလောက် crockery သို့မဟုတ်အရှက်ရှိခြင်းမဟုတ် ...
တစ်ဦးကတစ်ခါသုံးသုံးပြီးနှင့်ပစ်ဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်မှန်သော။ သို့သော်သူကအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ ok ဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုသလဲ ကျွန်ုပ်တို့သည်အကျိုးဆက်ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ရပ်များရှိစေခြင်းငှါကြည့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ဖူးသလား စျေးနှုန်းနှင့်ရည်ရွယ်ချက် - ငါတစ်ခါသုံးကုန်ပစ္စည်းမှနားလည်နှစ်ခုရှုထောင့်ရှိပါတယ်။ စျေးနှုန်း mater တူသောအချက်များ၏နံပါတ်ပေါ်မူတည်နေချိန်တွင် ...
Hot Cold Cups, Printed Carrier အိတ် , ပလပ်စတစ်ပေါင်မုန်အိတ်, Kraft Paper Straws, စက္ကူဖလား, ကိတ်မုန့်ပေါ့ပ်သေတ္တာ,